धनगढी, २८ पुस । रुपन्देही–११ लाई पराजित गर्दै मनाङ मस्र्याङ्दी ‘नेपाल आइस सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता‘को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय रंङ्गशालामा शुक्रबार भएको अन्तिम क्वाटर फाइनल खेलमा रुपन्देही–११ लाई शून्यका विरुद्ध ४ गोलले पराजित गर्दै मनाङ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । बीसौँैँ मिनेटमा मनाङका विदेशी भिक्टोर अमोवीले गोल गर्दै अग्रता दिलाए । पहिलो हाफमा १ गोलले अगाडि…
कपिलवस्तु, २७ पुस । अत्यधिक चिसोका कारण कपिलवस्तुमा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर कपिलवस्तु नगरपालिका–६ सौरहवा निवासी ६५ वर्षीय वृज मोहन थारुको मृत्यु भएको हो । आफ्नै घरमा सुतेका थारुको कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गएको वडा प्रहरी कार्यालय तौलिहवाका प्रहरी नायब निरीक्षक सन्त पछाइले जानकारी दिए । योसँगै कपिलवस्तुमा चिसोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ…
भक्तपुर, २८ पुस । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरले हालसम्म ३८६ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ । २०६९ साल वैशाख ११ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गरेको केन्द्रले हालसम्म ३८६ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको र गत वैशाखदेखि हालसम्म मात्र १०४ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए । केन्द्रले चौबिसै घण्टा दैनिक १०० जनाभन्दा बढीको हेमोडायलाइसिस सेवा सञ्चालन…
काठमाडौँ, २८ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन् । विनाविभागीय मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाउन लागेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सत्ता साझेदारीमा रहेकै बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा९एमाले०सँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको निर्णय गरिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका थिए । “निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि हामी सरकारमा थियाँै,…
काठमाडौँ, २७ पुस । तिब्र आलोचना भएपछि सरकार दलीय सहमति खोजेर भएपनि प्रदेशको राजधानी र प्रमुख तोक्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यसअघि आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले तत्काललाई प्रदेश राजधानी नतोक्ने र सबै प्रदेशका सांसदलाई काठमाडौँमै शपथ गराउने निर्णय गरेको थियो । तर विपक्षी दल लगायत नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलीय सहमतिमा चाँडै प्रदेश प्रमुख तोक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।…
सप्तरीमा चिसोले ज्यान जानेको संख्या २३ पुग्यो, थप तीन जनाको मृत्यु !
राजविराज, २७ पुस । चिसोका कारण सप्तरीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ रामपुरा बस्ने ५२ वर्षीया सरोदेवी मुखिया र ७० वर्षीया सरस्वतीदेवी साह तथा सुरुङ्गा नगरपालिका–१ निवासी ५१ वर्षीय अम्बरबहादुर पुलामीको चिसोका कारण मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक धुव्रकुमार श्रेष्ठले बताए । शव परीक्षणका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल ल्याइएको छ । यससँगै सप्तरीमा चिसोबाट मृत्यु…
इलाम, पुस २७ । इलाममा समुहमा व्यवसायी गरिरहेका किसानका २६ बाख्रा एकैपटक मरेका छन् । माइजोगमाई गाउँपालिका –५, सोयाङ्गमा नवदित बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपालन समूहका ६ वटा माउ बाख्रा, १३ वटा खसी र अन्य पाठापाठीसहित २६ वटा बाख्रा मरेका हुन् । समूहका उपाध्यक्ष बुद्ध तामाङ्गका अनुसार दानापानी तथा घाँस दिँइसकेपछि हेर्न जाँदा खोरमा बाख्राहरु मरेको पाइएका थिए । सात महिना अघिमात्र…
खडेरी परेपछि हाहाकार ! पानीको माग गर्दै मन्दिरमा जाग्राम र पुजाआजा शुरु
बैतडी, २७ पुस । लामो समयदेखि खडेरी परेपछि बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–४ का किसानले बाजागाजासहित पानीको माग गर्दै प्रसिद्ध रौलाकेदार मन्दिरमा बुधबारदेखि जाग्राम तथा पूजाआजा थालेका छन् । पानीको माग गर्दै उनीहरु रौलाकेदार मन्दिरमा जाग्राम बसेको सुरेन्द्रबहादुर महराले जानकारी दिए । बुधबार रातभर रौलाकेदार मन्दिरमा जाग्राम बस्ने र विहिबार बिहान प्रार्थना गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ, उनले भने, “योभन्दा पहिले पनि खडेरी…
युवतीको स्कुटरले ठक्कर दिँदा वृद्धको ज्यान गयो
उर्लाबारी, मोरङ, २७ पुस । मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा स्कुटरले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका एक पैदलयात्री वृद्धको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका–१ स्थित शिखरचोकमा गत पुस ६ गते दिउँसो १ बजे बा ५४ प ४५८८ नम्बरको स्कुटरले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका पैदलयात्री सोही ठाउँ बस्ने ८५ वर्षीय लालबहादुर चौहानको गएराति उपचारका क्रममा नोबेल अस्पताल, विराटनगरमा मृत्यु भएको…
कञ्चनपुर, २७ पुस । छोरा र गहनासहित श्रीमती बेपत्ता भएपछि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६, कसरौलका २६ वर्षीय चेतु राना खोज्दै हिँडे पनि पत्तो लगाउन सकेका छैनन् । एघार दिनअघि परिवारका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई उनकी श्रीमती २२ वर्षीया चैनीदेवी राना दुई छोरासहित गहना र लत्ताकपडा बोकेर बेपत्ता भएकी हुन् । आफन्त र सम्भावित ठाउँमा श्रीमतीको खोजी गरे पनि श्रीमती फेला पार्न नसकेको…
तराईमा चिसो घटेन, सिरहामा थप एक जनाको ज्यान गयो !
लहान, २७ पुस । पछिल्लो केही दिनयता बढेको अत्यधिक चिसोका कारण सिरहामा थप एकजनाको कठ्यांग्रिएर मृत्यु भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण कठ्यांग्रिएर गएराति सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१२ पूर्वीटोल निवासी ५८ वर्षीय खुसिलाल मुखिया मल्हाको कठ्यांग्रिएर मृत्यु भएको हो । यससँगै सिरहामा चिसोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ । यसअघि गत मंगलबार सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–६, सीतापुर निवासी ४१…